I-Xianglong Communication-umlingani obalulekile kubakhiqizi be-self-service-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Ukuxhumana kweXianglong-uzakwethu obalulekile kubakhiqizi bokugcina abazisebenzelayo
Isikhathi: 2021-03-20 Hits: 6
Ngokuthuthuka komnotho, imishini ethengisayo ivele emigwaqweni nasezitaladini; ukuthengwa kwamathikithi okuzenzela kanye nokuqoqwa kwamathikithi nakho sekuthandwa kakhulu ezinhlelweni zokuhamba njengezikhumulo zezindiza kanye neziteshi; Izibhedlela, amabhange, amahholo kahulumeni kanye nezinye izikhungo nazo zisabalalisa imishini ehlukene yokuzenzela izinsizakalo, Esiza kakhulu amazinga abantu okuphila futhi ithuthukise ukusebenza kahle komsebenzi.
Ama-kioski okuzenzela wona ajwayelekile kakhulu kulezi zinsuku, futhi izindawo zokuzisiza zamabhange amakhulu zingatholakala yonke indawo, futhi izinqubo zokusebenza zalezi zitimela ezizisebenzelayo ziyafana ngokuyisisekelo. Siyini isizathu sesizathu esifanayo? Vumela'hlola it ncamashi.
Kungabonakala ukuthi empeleni wonke amakhibhodi e-kiosk ayafana. Isizathu salokhu ukuthi ikhibhodi yekhiyoski inamandla futhi iyasebenza, kulula ukuyisebenzisa, futhi ingabhala ngemininingwane, ngakho-ke isetshenziswa kakhulu kumatheminali amakhulu okuzisiza.
Okokuqala, ngethula kafushane incazelo yomsebenzi wekhibhodi yomshini wokuzenzela. Izinombolo kukhibhodi zisetshenziselwa okokufaka, futhi ukusebenza kwamanje kuyakhanselwa lapho ucindezela u-Esc. Isibonelo, uma ufuna ukufaka imali kodwa uchofoze ukukhipha, bese ucindezela ukukhansela ukukhipha umsebenzi, ENTER Ukhiye umele ukhiye wokuqinisekisa. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwenkinobho ngayinye kuzokhonjiswa esikrinini, futhi kuzoba nemiyalo ehambisanayo yesinyathelo ngasinye sokusebenza, esiqinisekisa ukuba lula kwekhibhodi yekhiyoski.
Izinsiza zokuzenzela ezengeziwe zingene emkhakheni wethu wokubuka, futhi izindawo eziningi ezinjengezikhumulo zezindiza, iziteshi zezitimela, iziteshi zamabhasi, izibhedlela, amanyuvesi, amabhange, amahholo ezinsizakalo zikahulumeni, izitolo ezinkulu, izinxanxathela zezitolo, njll.
Njengomkhiqizi owaziwayo wasekhaya wamakhibhodi ezimboni, imikhiqizo yezokuxhumana yeXianglong imboza imithombo yezindaba, ezentengiselwano, ezokuphepha, ezemfundo, ezokudla, ezokwelapha neminye imikhakha. Ukuxhumana kweXianglong kunamakhono wokuxazulula okuhlanganisiwe kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukuthuthukiswa kwesikhunta, ukucutshungulwa komjovo wokufaka, ukunyathela ukucutshungulwa kwensimbi, ukucubungula okwenziwe ngomshini, ukuhlangana nokuthengisa. Inabakhiqizi abasebenza ngokugcwele abangu-8 futhi ingenza ngokwezifiso amamodeli ahlukahlukene angajwayelekile wamakhasimende. Isibambo, ikhibhodi nemfoloko yokulenga. Xianglong Ukuxhumana kudlule ngokulandelana isitifiketi se-CE nesitifiketi se-ISO9001. Uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi luqinisekisa ukwethembeka kwemikhiqizo, futhi uhlelo lokucwaninga nokuthuthukiswa komsindo luqinisekisa ukwenziwa okuqhubekayo kwemikhiqizo. Ukuze uhlinzeke amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ezingcono, iXianglong Communication iyaqhubeka nokwandisa nokwenza ngcono iziteshi zokumaketha, futhi isungule inethiwekhi yesevisi yokuthengisa yeziteshi embonini.
Okwedlule: Imakethe Yezinqubo Zocingo Lomlilo
Okulandelayo: Awenze Kanjani Uhlaselo Oluvuselela Imishini Ethengisa Imishini